हाईव्रिड HR तथा सरलीकृत पारिश्रमिक गणना
कर्मचारीको विवरण, हाजिरी विवरण भर्नुहोस तथा पारिश्रमिक गणना गर्ने मिति छान्नुहोस ।
निशुल्क प्रयोग गर्नुहोसवालग-इन
सुरु गर्नको लागि
जब तपाई सुचिकृत हुनुहुन्छ । तपाईले कर्मचारीको विवरण एक एक गरि भर्न वा एकममुष्ट अपलोड गर्नसक्नुहुन्छ ।
एक पटक मात्र
हाजिरी प्रणालि एकिकृत गर्नुहोस
तपाईको हाजिरी प्रणालि वा हाम्रो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
तलब भर्पाइ स्वत उत्पदन गर्न दिनुहोस
हरेक महिना तपाइले छानेको मितिमा यो सफ्वेयरले सम्पूर्ण कर्मचारीको आयकर गणना गरि तलब भर्पाइ तयार गर्नेछ ।
बारम्बार राखिने जिज्ञाशाहरु
डाँफेबुक्स के हो?
डाँफेबुक्स नेपाल कै पहिलो अनलाइन Hybrid HRM सफ्टवेयर हो जसमा मानव संशाधन व्यवस्थापनको साथै कर्मचारीहरुको हाजिरीको विवरण व्यवस्थित रुपमा संचय गर्न सकिन्छ।
डाँफेबुक्स नेपाली पात्रो (बिक्रम संवत प्रणाली) मा केन्द्रित छ। यस विशेषताले गर्दा कर्मचारीहरुको मासिक तलब नेपाली महिनामा आफैले उत्पादन गर्न सक्छ।
यसको अर्को विशेषता, नेपाल सरकारले सरकारले जारी गरेको सार्बजनिक बिदा हरेक बर्ष अध्यावधिक हुन्।
Hybrid HRM + Payroll Software (मानव संशाधन व्यवस्थापन तथा आय भुक्तान किताव) भन्नाले के बुझिन्छ?
यो मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रणाली हाईव्रिड प्रणाली यस कारण हो कि यसको सेवा विशेषता धेरै छ। एक संगठन मा कुनै एक कम्रचारीको कार्य धेरै हुन सक्छ, त्यो कर्मचारी को विविध कार्यको सरल तरिका ले रेखदेख गर्न सहायता गर्छ।
साथै आय भुक्तानी किताबले तपाई को काम सहज बनाउछ र समय बचत गर्दछ । कार्यालयको हरेक कर्मचारी को तलब, उनीहरु ले तिर्नु पर्ने कर, लिएको वा लिन बाकी बिदा को जानकारी सजिलै गर्नमा यो हाईव्रिड सफ्टवेयर राम्रो छ।
डाँफेबुक्सले आय/तलब भुक्तान हिसाब/किताब कसरी स्वचालित गर्दछ?
सर्वप्रथम, डाँफेबुक्स नेपाल सरकार बाट जारी गरिएको बिक्रम सम्बत पात्रोमा आधारित छ। यस कारण नेपाली महिना अनुसार तलब भर्पाइ गर्न महिनाको अन्त्य कार्यदिनमा यो सोफ़्टवेयरले सघाउ पुर्याउछ।
साथै हाजिरी र बिदा दिनको को ख्याल राखी तलब को हिसाब/किताब गर्छ।
डाँफेबुक्सले नि:शुल्क प्रयोग उपलब्ध गराउनुको कारण?
हामीलाई थाहा छ - व्यापार को सुरुवात गर्न र सुरु गरेको की समय सम्म आर्थिक श्रोत र मानविय श्रोत सिमित हुन्छा। हामी आफै पनि त्यो समय पार गरेर आएका हौ। त्यो परिस्थितिबाट अगाडी बढ्न र सफल हुनका लागि साना तथा घरेलु व्यावसायलाई सहायोग पुग्योस भन्ने हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामीले यो नि:शुल्क प्रयोगको सुबिधा तपाई माझ ल्याएका हौ।
तर दश (१०) भन्दा बढी कर्मचारी रहेको संस्था वा कम्पनीले भने र अरु बिबिध सुबिधाको उपयोग गर्न परेमा सेवा शुल्क लाग्ने जानकारी गराउन चाहनछौ।
सुचना! हामीले नयाँ विशेषता थपेका छौं - ई.एम.आइ. क्याल्कुलेटर
थप जानकारीका लागी प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुहोस